Fitakiana an’ireo Nosy malagasy :: Niteraka fifohazan’ny hambom-pom-pirenena ny fikaonan-doha teny Ivato • AoRaha
Fitakiana an’ireo Nosy malagasy Niteraka fifohazan’ny hambom-pom-pirenena ny fikaonan-doha teny Ivato
Nirenty nanenika ny efitrano fivoriana iraisam-pirenena (Cci) teny Ivato ny sainam-pirenena Maitso, fotsy, mena. Samy noentanim-po nampiseho ny hambompom-pirenena ireo mpizaika nisolo tena an’ireo faritra 22 manerana ny Nosy. Naredona ihany koa ilay hira “Madagasikara tanindrazako”, rehefa noentanin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mba hiraina teo am-pamaranana ny kabariny. Tsy mila ady amin’i Frantsa i Madagasikara fa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitakiana ny zo tokony hositrahantsika amin’ireo Nosikely ireo, taorian’ny fehin-kevitra navoakan’ny firenena mikambana tamin’ny 12 desambra 1979 izay nitsingerina omaly ny faha- 40 taona, no niaingan’izany.
Nizotra tamim-pilaminana ny fanangonan-kevitra nandritra ny hateloana teny Ivato. Notsindrian’ny praiminisitra Ntsay Christian fa “sambany teto amin’ny tantaram-pirenena no nisy fakan-kevitra nasionaly mikasika ny fitakiana an’ireto nosy manodidina an’i Madagasikara ireto”. Fanamby goavana ny hamerenana ny fiandrianam- pirenena malagasy amin’ny nosy Sambatra, Bedimaka, Ampela, Nosy Kely, na anarana fiantsoana an’ireo nosy ireo hatramin’izay. Hita fa niray hina ny Malagasy rehetra. Navitrika sy nifanaja ny olona na dia samy hafa aza ny hevitry ny tsirairay taorian’ny teny nomen’ny Filoha mikasika ny fitakiana an’ireo nosy Malagasy ireo.
Fampidirana ao amin’ny lalàm-panorenana
Tsiahivina fa soson-kevitra nivoaka taorian’ny filan-kevi-pirenena natao teny Ivato ny fitakiana ny fampidirana ao anatin’ny lalàm-panorenana sy ao anatin’ny fandaharam-pianarana, ary ao amin’ny saritanin’i Madagasikara an’ireto Nosikely manodidina an’i Madagasikara ireto. Tokony hohavaozina sy hohamafisina koa ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny harena voajanahary amin’ireo Nosy Malagasy ireo. Hanaovana tombana ny tombontsoa ara-toekarena tokony ho azontsika amin’ireo Nosikely ireo. Mba hahafahana manokana tetibola hikarakarana ny tany sy ho fampitaovana an’ireo tafika hiaro azy ireo no anton’izany.
Olona manan-kaja maro no tonga nanatrika ny lanonana famaranana ny fakan-kevitra nasionaly mikasika ny fitakiana an’ireto nosy efatra manodidina an’i Madagasikara ireto. Anisan’izany ireo mpandray anjara, ny mpikambana ao amin’ny governemanta sy ireo tompon’andraiki-panjakana hafa, ny Filoha teo aloha Ratsiraka Didier, ireo solombavambahoaka sasantsasany…
Fiainana mpanakanto :: Mitantara ny fahafatesan-jandriny sy ny « Drako hely » i Rijade
Onjam-piainana :: Zaza, 4 taona, nokendaina tamin’ny takon-kenatra